IHuawei ibandakanyeka ngokupheleleyo ekonyuseni amandla okuyila abantu abancinci | Iindaba zeGajethi
Inkampani yaseTshayina ithatha amanyathelo amakhulu ngaphaya kokuthengiswa kweemveliso ze-elektroniki kwaye ngoku emva kwempumelelo ephunyezwe ngeZiko leYunivesithi yase-TAI lezobuGcisa eMadrid, Inkampani izakuvala izivumelwano kunye namaziko oyilo alungileyo eYurophu.
Kancinci kancinci bayangena ngokupheleleyo ukonyusa italente encinci kwaye oku kulungele wonke umntu. Into abayifunayo kuphawu lwentengiso kukukhuthaza ubuchule babantu abancinci kwicandelo lezinto ezintsha, kuba oku kuyakuqinisa ukusebenzisana nezikolo ezininzi zoyilo eYurophu.
Uvavanyo lwe-litmus lwenzeka eMadrid
IHuawei iya kuthatha njengesalathiso ukusebenzisana ngempumelelo kunye Iziko leYunivesithi ye-TAI yoBugcisa eMadrid, eqale ekuqaleni kwalo nyaka nalapho abafundi abali-120 bathathe inxaxheba ekufuneka kuphuhliswe "Imixholo" eyahlukeneyo yee-smartphones, eya kuthi ibonakale kwisicelo seHuawei. Kule nto, abafundi babalwa "njengomqeqeshi" kunye nomyili weqela leNkonzo yeLifu laseHuawei eYurophu. Inani elipheleleyo labafundi, abali-10 bakhethelwa ubuchule babo. IHuawei ikhuphe imixholo engama-50 eyenziwe ngabafundi be-TAI, eyayinokukhutshelwa okungama-500.000 kwiinyanga ezimbini
Kule meko, imixholo zizicelo zeHuawei apho umsebenzisi anokutshintsha ukubonakala kwe-smartphone yabo ngocingo olwahlukileyo. Khetha iphepha lodonga olithandayo, ii icon, kunye nokutshixa izikrini kwizinto ezahlukeneyo ezinokubakho. Nawuphi na umyili unokwenza imixholo yakhe kwaye uzilayishe kwisicelo usebenzisa ifayile ye- inkqubo elula, ukhetha ukuba ufuna ukwaziwa simahla okanye ube yinxalenye yenkqubo yezihloko ezihlawulelweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IHuawei ibandakanyeka ngokupheleleyo ekonyuseni amandla okudala abantu abancinci